5 mienzaniso yekubudirira e-commerce | ECommerce nhau
5 mienzaniso yekubudirira e-commerce
Parizvino ungangove uine zano rakanaka rekuti chii chinoita kuti ecommerce saiti ishande nemazvo uye kuti kune akawanda zvakanakira e-commerce. Nekudaro, hapana zvirinani kupfuura kuziva chaiyo mienzaniso yemapuratifomu ari kunyatso kubudirira muchikamu chavo. Isu tinogovana iwe pazasi 5 mienzaniso yekubudirira e-commerce.
Imwe yeaya e-commerce mienzaniso ine bhizinesi modhi zvakasiyana kwazvo. Isu tinokurudzira kuti iwe uongorore kusimba uye kushaya simba kweumwe neumwe pamwe newawo trajectory nekufamba kwenguva kuitira kuti iwe uone kuti vakagadzirisa sei kune tekinoroji uye nzanga shanduko.
1 Amazon, inonyanya kuita e-commerce muenzaniso
Amazon, inonyanya kuita e-commerce muenzaniso
Zvichida iyo e-commerce chikuva inozivikanwa nhasi uye nekubudirira kwakaratidza. Iyo kambani yakwanisa kubudirira muecommerce nekutendera vamwe vanhu kutengesa zvigadzirwa zvayo pawebhusaiti yayo, asi zvakare inopa huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zvemarudzi ese wega.
"Ungatengesa sei paAmazon USA", bepa nyowani chena kubva kuSareSupply
Iyo zvakare imwe yeiyo anobudirira kwazvo ecommerce zvitoro paInternet iyo inomiririra yakachena uye yakapusa webhu dhizaini, pamusoro pekuti ive nerunyorwa rwakatsikiswa runyorwa rwezvikamu, yekutsvaga basa, kutumira kwemahara pane ese maodha. Pasina kupokana, inobudirira zvikuru Ecommerce.
Iyi ikambani inozivikanwa kwazvo mune desktop uye laptop chikamu. Iyo zvakare ine Kubudirira ecommerce kubva uko vatengi vanogona kuwana zvakasiyana siyana zvigadzirwa, zvakadzama dhisikaundi uye yakanyatsogadziriswa webhu dhizaini kuti iwedzere ruzivo rwekutenga.
Ndicho e-commerce webhusaiti, inozivikanwa nekupa maokisheni emarudzi ese ezvigadzirwa. Pano zvakare vanhu vanogona kunyoresa uye kutengesa zvigadzirwa zvavo zvakananga. Inosanganisira chirongwa chekuchengetedza mutengi chinoratidza mashandiro aungaita nebasa revatengi.
Iwo zvakare mumwe muenzaniso we kubudirira muecommerce, yakanangana nekutengeswa kwezvinhu zvakaita seGadget, zvemagetsi, zvakaunganidzwa, maT-shirts, nezvimwe. Chigadzirwa chimwe nechimwe chakanyatsotsanangurwa uye mifananidzo yacho inosanganisirwa inoratidza hunhu hwayo zvakadzama; hapana mubvunzo muyedzo wezvese kuyedza kunoiswa mukugadzira inoyevedza Ecommerce.
Iwe unoziva chero mimwe mienzaniso yekutengesa zvemagetsi? Ehezve, kune akawanda akawanda uye imwe neimwe ine zvayakanakira, asi pamwe shanu dziri pamusoro ndedzimwe dzenyaya dzinomiririra dziripo nhasi.
Kana iwe uchida kutaura zvimwe e-commerce muenzanisoTisiye komendi uye utiudze zvaunoda nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » ECommerce kudzidziswa » 5 mienzaniso yekubudirira e-commerce
Ungaita sei kubudirira muecommerce?
Kutakura ° ,,,
Ungada here kunwa kofi kubhawa kwasekuru vangu.
varume ava vaive batimamaron
Mhoroi, ndinoda kuziva ecommerce mune dzidzo.
e commerce mune zvedzidzo inonzi e kudzidza
Ndinoda kuziva zvakawanda nezve ecommerce
Nyowani mabhizimusi mamodheru Startups uye vanamuzvinabhizimusi